Indlela yokwenza isigqubuthelo: izinto zegraphic kunye neempawu ngokubanzi | Abadali be-Intanethi
Umthombo: Diario de Cádiz
Yonke imihla kukho abantu abaninzi abahamba ngeendaba zentengiso, nokuba i-intanethi okanye i-intanethi, kodwa ziyimithombo yeendaba ebalulekileyo kuthi.
Yintoni abaninzi abangayaziyo yindlela yokuyila ikhava ehambelana nomxholo wemagazini nganye, ibhlog okanye incwadi, kwaye idibana Uluhlu olufundekayo olufanelekileyo kwaye ngaphezu kwayo yonke loo nto, inqaku ngalinye lomzobo oko kuqukiwe: iifonti, imifanekiso, imizobo okanye imizobo, ingeniswe ngendlela egqibeleleyo.
Umyili akapheleli nje ekubeni akwazi ukuqonda oko akuyileyo, kodwa ukwamele anike ukubaluleka koko kubaluleke ngokwenene. Yiyo loo nto kule posi siza kukubonisa ukuba ibaluleke kangakanani ikhava.
1.1.4 Igama/inombolo yekhosi okanye iklasi
1.1.6 Igama likatitshala
2 Indlela yokwenza ikhava ngokuchanekileyo
3 Iintlobo zamaqweqwe
3.1 Iqweqwe lokomfuziselo
3.2 iqweqwe lombhalo
3.3 Ingcinga kunye nekhava engabonakaliyo
4 ubuchule bokuyila
4.1 sebenzisa imibala
4.2 Igqibelele izinto
4.3 Sebenzisa izixhobo ezifana nemifanekiso kwaye ufumane impembelelo
Umthombo: Audrey's Croissant
Iqweqwe yeyona nto ibalulekileyo kuyo nayiphi na indlela, kuba yinto yokuqala ebonwa ngumjongi okanye umfundi. Ngoko ke, yinto yokuqala ebuzwayo, egxekwayo kwaye ukuba iliso lethu libone okokuqala. Kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba i-inshorensi kwithisisi okanye iprojekthi yekhondo lomsebenzi kufuneka ibe yiyo eqokelela lonke ulwazi esithe saluseka kwaye. shwankathela ngesihloko esiphambili, isihlokwana kunye negama lokuqala nelokugqibela.
Kwakunye nolwazi lweklasi olufana negama okanye inombolo yekhosi, umhla, igama likanjingalwazi kunye negama leziko. Enye inkcukacha ekufuneka ithathelwe ingqalelo yeyokuba isigqubuthelo asinanombolo kwaye kufuneka sibe nomda omalunga neesentimitha ezi-2 kwicala ngalinye.
Into yokuqala ekufuneka siyithathele ingqalelo kukusasazwa kwezinto esifuna ukuzongeza kwikhava yethu, kungoko kuyimfuneko.
Isihloko kulula kakhulu ukwenza kwaye kuthatha nje imizuzu embalwa. Licandelo lokuqala leqweqwe kwaye lisiko lokuqala elibonwa ngumfundi.
Ngesi sizathu kufuneka ulumkele ukuba ayiqulathanga naziphi na iimpazamo njengoko oku kunokubangela imbonakalo embi; umfundi unokuthathela ingqalelo oku phambi kokuba avavanye umgangatho womxholo.
Isihloko somsebenzi kufuneka sicace kwaye sinyaniseke ukuze kube lula ukuqaphela ukuba umsebenzi ungantoni na. Kukho imigaqo ethile ye-APA okanye imigangatho apho amaphepha esihloko alawulwa ngayo. Kubalulekile ukwazi iimfuno ezithile zesebe elithile, iyunivesiti okanye iziko.
Ngokuqhelekileyo kwiingxelo zenzululwazi, amaphepha ophando kunye neethisisi, isihloko singena embindini kwaye silungelelaniswe, embindini wephepha. Ukuba umsebenzi unombhalo ongezantsi, ubekwe ngaphantsi kwesihloko.
Kwimeko yomsebenzi weqela, amagama apheleleyo amalungu eqela kufuneka achongwe. Igama elipheleleyo lombhali kufuneka libe kwiphepha lesihloko. Kufuneka ubeke igama elipheleleyo, kunye negama lokuqala, zombini ifani kunye nombindi ukuba uyafuna.
Le elementi inokubekwa imigca emininzi ngezantsi kwesihloko. Kuyimfuneko ukuba ibekwe kwikhava kuba ngale ndlela unjingalwazi okanye nabani na ofunda umsebenzi unokwazi ukuba ngubani olungiselele uphando, iphepha lezenzululwazi okanye ithisisi.
Ngombulelo kumbhali, unokwazi ngokulula ukuba ngubani owenze umsebenzi okanye uphando. Yonke imisebenzi kufuneka ibe nombhali omnye okanye ngaphezulu; oku kuthetha ukuba bangaze bangaziwa. Yonke ithisisi, uphando lwenzululwazi okanye umsebenzi wezemfundo kufuneka ube neekhredithi zababhali.
Ngokuqhelekileyo, umhla wokuhanjiswa komsebenzi ubekwe phantsi kwekhava, ngokuqhelekileyo yinto yokugqibela ebekwe kwikhava kwaye iqinisekisa usuku, inyanga kunye nonyaka iprojekthi eyenziwe ngayo.
Kubalulekile ukuyibhala kuba ngenxa yoko umfundi unokufumanisa malunga nomhla apho umsebenzi, ithisisi okanye uphando lwezenzululwazi lubhalwe ngalo.
Kwimeko yokuba luqweqwe lwethisisi yaseyunivesithi okanye enomxholo othe kratya wemfundo, ihlala ibekwa kwakhona:
Igama/inombolo yekhosi okanye iklasi
Kuyimfuneko ukubeka igama leklasi okanye isifundo kwikhava ukuze isihloko okanye indawo yophando lomsebenzi yaziwe ngokukhawuleza. Umfundi kufuneka akwazi ukuchonga ngokukhawuleza indawo yokufunda ukuze azi kwasekuqaleni ukuba ithisisi okanye umsebenzi wokufunda uza kuba ngantoni.
Ukuba iklasi inenombolo, kufuneka ibekwe kwakhona ukuze utitshala akwazi ukuchonga kwasekuqaleni ukuba umfundi/umsebenzi oza kuvavanywa ungowakweliphi na. Oku kwenza umsebenzi ube lula kakhulu.
Kuqweqwe lweqweqwe, isidanga esifundwayo okanye ikhosi ojoliswe kuyo umsebenzi kufuneka ibekwe. Kuyimfuneko ukuyibeka kwikhava kuba ngale ndlela unokwazi inqanaba lomyalelo analo umbhali xa ebhala iphepha lezifundo okanye ithisisi.
Ezantsi kwendawo apho igama leklasi libekwe khona, ungabeka igama elipheleleyo likatitshala. Kuyimfuneko kuba ngale ndlela umfundi unokwazi ukuba lo msebenzi unikelwe kubani. Utitshala nguye odla ngokunika okanye ophethe amaphepha ezifundo zekhosi yakhe ethile.
Amanye amaphepha esihloko aquka indawo apho umsebenzi wokufunda wawubhalelwe okanye wenziwa khona. Oku kunceda ukuchonga ngokulula apho uphando luvela khona; kwindawo urhulumente okanye iphondo kunye nelizwe imvelaphi yomsebenzi okanye ithisisi ibekwe.
Ngokuqhelekileyo ifumaneka ekupheleni kwekhava, nangona oku kunokwahluka ngokuxhomekeke kumsebenzi wezifundo okanye kwiziko elithile
Indlela yokwenza ikhava ngokuchanekileyo
Ukuyila isigqubuthelo ngokuchanekileyo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo iinkalo ezininzi:
ubungakanani bephepha: ngesiqhelo idla ngokuba yiDIN A4
Isayizi yefonti: Ukuba yeyokushicilela, kusoloko kucetyiswa ukuba kubekho ubuninzi bamanqaku ali-12 kwaye kusetyenziswe iifonti ezifundeka ngokwaneleyo.
Ngokuphathelele imida kubonakaliswe ukuba kufuneka babe: kwi-plane ephezulu 3cm, ukuya ekhohlo 4cm, kwindawo ephantsi 3cm, ukuya kwesokudla 2cm.
Izigqubuthelo ezizezafobe luhlobo olukhethekileyo kakhulu lwesigqubuthelo kwaye yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu ukusukela oko ifoto isetyenziswa, ngokwesiqhelo, ngokwesiko. izinto zoqobo zongezwa ukongeza uburharha okanye ubukrelekrele, ngelixa ubonelela ngeemvakalelo zokuzonwabisa ezimema umfundi ukuba athenge iphephancwadi kwaye azintywilisele kulonwabo.
Lolona khetho luncinci lusetyenziswayo namhlanje, apho okubhaliweyo kusetyenziswa kakhulu, okanye okubhaliweyo kunye nomfanekiso ongasemva omangalisayo. Kodwa ngokuchanekileyo, kuba inqabile, inokunceda ukufezekisa injongo yethu: tsalela umdla wabafundi.
Ingcinga kunye nekhava engabonakaliyo
Inokuthi ithathwe njengeqweqwe elimangalisayo, ngamanye amaxesha lisetyenziswe kwiimagazini zokufota okanye kwimiba yoyilo. Sebenzisa imizekeliso okanye iifoto ezinoyilo olunxibelelanisa iikhonsepthi ezintsonkothileyo okanye intsonkothe ​​ngokukhawuleza, ngokulula nangokulula.
Olunye lolona yilo lwemagazini lusebenza ngokucokisekileyo, lubonisa ukuba ukutshiza kombala ongqindilili kunokubonakala ngakumbi kunombala oqaqambileyo.
Ukudibanisa umbala omnye ongqindilili kunye nefoto emnyama namhlophe kunye nesicatshulwa esine-monochrome, kubonakala kumnandi kwiimagazini zamadoda kunye nezihloko zobuchwepheshe. Ukuchwetheza okuqaqambileyo, iibhanile, kunye nezahluli zinika uyilo umphetho wezemidlalo, wamadoda.
Emva kokuba umfundi eyivulile iphephancwadi, iziqulatho zamaphepha ziya kuba sisiphelo sabo sokuqala. Umxholo wamaphepha kufuneka usebenze kwaye uvumele abafundi ukuba bafumane amacandelo kunye namanqaku ngokulula, kodwa ikwayindawo egqibeleleyo yokusebenzisa ubuchule obuncinci.
Ukuba imagazini inomthamo omkhulu womxholo, musa ukuwukhawulela umxholo wakho kwiphepha elinye, yahlula umxholo kumaphepha aphindwe kabini. Oku kuya kukunika isithuba esaneleyo sokungena isihloko esikhulu semixholo, zama ifonti yeserif ethe tyaba okanye olunye uhlobo lohlobo olunempembelelo enkulu, kunye nemifanekiso emininzi enomtsalane.
Sebenzisa izixhobo ezifana nemifanekiso kwaye ufumane impembelelo
Bhrawuza nawuphi na umboniso wemagazini kwaye uya kuqaphela ukuba uninzi lwamaqweqwe asebenzisa iifoto njengesixhobo sokucinga sokukhetha. Nangona kunjalo, isigqubuthelo somfanekiso sinokujongeka sikhethekile kwaye sinesitayile kakhulu, kwaye lukhetho oluhle lwetekhnoloji, ubugcisa, kunye nezihloko zoyilo. Imizobo emcaba kulula kakhulu ukuyila kwaye inokwenza imagazini yakho ijonge phambili ngakumbi ijonge phambili.
Ziqhelanise ne-Adobe Illustrator, Coreldraw okanye Inkscape ukwenza imizobo yevektha enokusetyenziswa kwi-InDesign yakho yamagama ngokulula kakhulu.
IiVectors ziyindlela entle yokuvakalisa iikhonsepthi ezingaphaya okanye ezintsonkothileyo, kwaye ngenxa yoko lukhetho olugqibeleleyo lweemagazini ezingangeni kwifashoni yesiqhelo okanye iindlela zokuphila.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga noyilo lokuhlela. Ngoku lithuba lakho lokuba uqale ukuyila imizobo yokuqala yamaqweqwe akho okuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Indlela yokwenza isigqubuthelo
Ileta entle malunga neposta